CPA VS. Chartered zveakaunzi - Which Is Better? [It's A Close Call]
CPA Vs CA (Chartered zveakaunzi): Ndezvipi zviri nani kwamuri?
23 Aug CPA Vs CA (Chartered zveakaunzi): Ndezvipi zviri nani kwamuri?
Updated:Gumiguru 20, 2018
Ndezvipi zviri nani? Izvo rokuti kuchabatsira basa rako? Pavanosarudza pakusarudza basa iri accountancy, muve parumananzombe kusarudza CPA kana CA. Mubvunzo unokosha kuti unovapo ndewekuti CPA inobatsirwa renyu nebasa nzira kana CA? Hakuna weNobel pachena nokuti vose zvinodiwa kuchabatsira kukura kwako rwokugadzira unyanzvi, accountancy unyanzvi uye mabhizimisi utariri unyanzvi. wo, CPA uye CA yokuisira sevanonyanya zvakafanana kupararira mhiri wezvokutengeserana uye voruzhinji chizvidavirire - saka mumwe zvinodiwa kunopa kunonyanyisa mukana wokushandiswa kushanda kuyambuka indasitiri. Ngatitorei Kutarira chii nerimwe certifications izvi kunotoreva uye misiyano pakati maviri.
Chii chinonzi CA?
CPA Vs CA: mari
CPA Vs CA: Time Zvinodiwa
CPA Vs CA: Certification mari uye Zvinodiwa
saka, Ndezvipi zviri nani kwamuri?
A vaipupurirwa Public zveakaunzi ari nyanzvi vane vakapfuura CPA bvunzo inopiwa American Institute of vaipupurirwa Public Accountants (AICPA) uye akazadzisa zvose zvinodiwa dzidzo uye basa ruzivo chokuita achitora bvunzo. Nyanzvi ava nyanzvi US GAAP, US batana mari mutero, uye nedzimwe nzvimbo dzakawanda US chizvidavirire uye mutemo mari akadai Auditing. Kunyange zvazvo advertising ichi anokudzwa munyika yose, chinhu US rokuti certifying kuti nenyanzvi nomazvo muna US chizvidavirire uye kukwanisa kuita Auditing uye mitero mabasa kuti dzimwe nyanzvi havabvumirwi kuita.
A Chartered zveakaunzi (CA) ari nyanzvi uyo vakapfuura CA bvunzo uye zvaida dzidzo munyika yekwake kana ake advertising. Kune masangano akawanda anopa dzidzo uye kuongorora kuti CAS. A mienzaniso mishomanana zvinosanganisira Institute of Chartered Accountants pamusoro Scotland (ICAS), ari Institute of Chartered Accountants muEngland uye Wales (ICAEW), Institute of Chartered Accountants India (Ichhai) uye Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA.) Chartered Accountants in Canada, Ositireriya, Nyuzirendi, Mexico uye Ireland vane reciprocity sungano United States. Kana vanogona kupfuura imwe equivalency bvunzo, vanogona kushanda U.S. sezvo CPAs. CAS vari nyanzvi mune IFRS uye dzimwe dzakawanda chizvidavirire mitemo. Kunyange vangave vane kunyatsonzwisisa zvakanaka US GAAP, havasi sezvo vakadzidziswa munzvimbo iyi sezvo CPAs vari.
The CPA rokuti kuchaita kuzarura yakawanda basa nzira kwamuri. Awana kwako CPA advertising unogona kushanda pasi chizvidavirire minda siyana dzakadai International Accounting, zvemukati & External Auditing, kubvunza Services, forensic Accounting, Panga Services, mutero & Financial Planning nezvimwewo. Wayo yose pamutemo, uchawana nzvimbo yakanakisisa kushanda chero munyika dzakawanda. Saizvozvowo, CA rokuti Zvicharatidzawo iwe nzira dzakawanda kushandiswa nzvimbo Accounting akadai Auditing, mutero, Corporate Finance, Corporate Law. Awana kwako CA advertising zvaunogona kana basa iri huripo pamusoro yemakambani pamusoro Accountancy kana iwe unogona kutanga kwako akazvimirira nyanzvi tsika pachavo.
Zvose CPAs uye CAS mari kuvimba kwako nzvimbo, musoro webasa, uye makore ruzivo. saka, Ivo siyana zvikuru. MuMedhia akapiwa muhoro kuti CPA muna U.S. ndizvo $62,410 uye muMedhia akapiwa muhoro kuti CA muna U.K. ndiyo £ 34.637 ($44,849 USD). Both certifications vane guru muhoro kumusoro mufambo uye anogona mumwe kuita $150,000 kana kupfuura rimwe gore zvichienderana chinzvimbo uye nenhanho ruzivo.
Hazvina zvishoma yakananga kuva CPA tichitarisa nguva zvinodiwa. Unofanira wapedza 150 Rokutenderwa chikwereti maawa uye unofanira kunge aishanda ari kupiwa nhamba maawa pasi zvakananga pokudzora ane CPA. You ipapo 18 mwedzi kugara kuti upfuure zvose zvikamu zvina CPA bvunzo. saka, yaigona kutora rinenge 8 1/2 Makore kuva CPA (makore mashanu Rokutenderwa basa, Makore maviri pamusoro basa uye 18 mwedzi kupfuura CPA bvunzo). Zvinotora nguva yakareba sei kuti kuva CA zvinoenderana chii nyika waronga kudzidzira uye dzenyu pamwero dzidzo uye nyanzvi ruzivo. Somuenzaniso, ari ICAS ane mana zvokusarudza:
Direct kupinda nzira kuchikoro-leavers, kunoda makore mashanu kudzidziswa ane ICAS-mvumo mushandirwi;
Graduate kupinda nzira kuyunivhesiti kudzidza, kunoda makore matatu okudzidziswa ane ICAS-mvumo mushandirwi;
Professional kupinda nzira kuti ruzivo mari nenyanzvi ndechokuti asimbiswa nyanzvi nedhigirii yunivhesiti (pamutemo kuzivikanwa somunhu UK yakaenzana) kana makore mashanu akakodzera basa ruzivo uye
Pathway nzira unobvumira nhengo The Chartered Institute of Public Finance uye Accountancy (CIPFA) mukana wokuva nhengo ICAS uye kuwana CA izita.
Kune nzira mbiri; mumwe anoyera akakodzera unyanzvi uye mumwe, hunoshanda kugona. Both pathway zvinoda makore manomwe post-zvinodiwa ruzivo. Yakanakisisa "maapuro-to-maapuro" kuenzanisa aizova CPA = ICAS gwara #2.
Imarii kuwana kwenyu CPA rezinesi iri shanduka. inoti zvose zvinoda kuti iwe uwane kushoma pakati tsvimborume kuti dhigirii chizvidavirire kana bhizimisi kusanganisira vanoverengeka zvaida kosi. Anenge inoti zvose zvinoda kuti iwe uwane kanenge 150 chikwereti maawa pamwe. saka, edzidzo wako CPA zvinoda achizosiyana zvichienderana kana ukatsvaka dhigirii tenzi kuti mari yako yekupedzisira 25 kukoreji chikwereti maawa kana kungoti kutora mamwe makirasi Rokutenderwa dhigirii chirongwa chako. The advertising kwacho ichatambanudzirwa mari pamusoro $3,000 kusanganisira zvakakodzera CPA ongororo kosi uye bvunzo yechikoro. Mushure rasai bvunzo, unofanira kuchengeta rezinesi rako rinoshanda ne mberi dzidzo Credits nerimwe gore. Izvi siyana mutengo asi vakawanda varasikirwe pakati $50-$100 por chikwereti awa. Most inoti inoda kumativi 40 Credits pagore. Usanetseka Zvisinei. Kana wawana basa pane paruzhinji chizvidavirire yakasimba, vacharipa nokuramba kwako dzidzo.
Mari nokuti kuva CA kunoenderana uchigara munyika, dzidzo uye basa rako ruzivo uye sangano zvauri kushandisa kuti chokuwana credential yenyu.
Semuyenzaniso, kana uri kushandisa kuna ICAS uye wasarudza nzira #1 uye #2 (zvakananga kupinda chikoro kana kuyunivhesiti) ipapo waunoshandira kuchazadza mari. Kana iwe vasarudze gwara #3 (ruzivo Professional), mari ndiwo nehasha £ 5.750 - £ 13.900. gwara #4 (nokuti CIPFA nhengo) mari ndiwo £ 1,035 nokuti Relevant Expertise gwara. Nokuti Practical kugona gwara, mari ndiwo: £ 596 yokudzidzisa chibvumirano ari; £ 1,547 - £ 1.935 kuti kirasi yechikoro; £ 292 nokuti bvunzo kubhadhara uye £ 495 kuti pagore ICAS / CIPFA nhengo zvakavakodzera. Kana pane kuramba dzidzo uye kutyora zvinodiwa, vachange pakutsvaga nyika iri yauri kushanda.
Kana uchifarira kushanda kunze kana mune vemarudzi akasiyana-siyana kambani, unofanira vasarudze CPA. Unogona kudzidza zvakawanda pamusoro yakanakisisa CPA prep makosi pano. Nerumwe, kana uchida kutanga yako odhita tsika mu India, vasarudze CA. Mukuwedzera, ari CA bvunzo iri yaisadhura sezvo kufananidzwa CPA kuongorora kuti. Kana mumwe certifications izvi kupfuura vamwe. Zvakasiyana kungoti uye raishandiswa zvinangwa zvakasiyana. Unogona kutarisira kuti pamusoro chete muhoro pamwe nezvezvaiitwa yandakapiwa nzvimbo, basa nechinzvimbo, kambani, uye basa ruzivo ndivo chete. Chaizvoizvo anoburuka kuti zvaunoda kuita uye apo uchida kushanda. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
CPA, Roger CPA Review, Exclusive Discount, Deep Discount 33 anoshandisa nhasi
Last Used 11 maminitsi kare
CPA, Surgent CPA Review, Exclusive Discount 37 anoshandisa nhasi
Last Used 39 maminitsi kare
Zuva rekupera: Gumiguru 20, 2018
Last Used 2 maminitsi kare
Last Used 9 maminitsi kare
CPA, Wiley CPAexcel, Special Offer 35 anoshandisa nhasi
Last Used 12 maminitsi kare
CPA, Roger CPA Review, Exclusive Discount 34 anoshandisa nhasi
CPA 33 anoshandisa nhasi
Last Used 33 masekonzi apfuura
CPA, Surgent CPA Review, Deep Discount 39 anoshandisa nhasi
Last Used 14 maminitsi kare
CPA, Exclusive Discount, Fast Forward Academy 39 anoshandisa nhasi
CPA, Special Offer, Kupwanya The CPA 39 anoshandisa nhasi
CPA, Roger CPA Review, Deep Discount 38 anoshandisa nhasi
CPA, Gryfina, Exclusive Discount 34 anoshandisa nhasi
CPA, Gleim CPA Review, Exclusive Discount 38 anoshandisa nhasi
Last Used 13 masekonzi apfuura
CPA, Wiley CPAexcel, Exclusive Discount 36 anoshandisa nhasi
CPA, Surgent CPA Review, Webinar 35 anoshandisa nhasi
CPA, Roger CPA Review, mari Offer 38 anoshandisa nhasi
CPA, Surgent CPA Review, mari Offer 33 anoshandisa nhasi
CPA, Surgent CPA Review, Free Trial 33 anoshandisa nhasi
CPA, Roger CPA Review, Other 37 anoshandisa nhasi
CPA, Wiley CPAexcel, Other 41 anoshandisa nhasi
CPA, Wiley CPAexcel, Exclusive Discount 41 anoshandisa nhasi